Koox hubeysan & Ciidanka Dowladda oo Muqdisho ku dagaalamay - Awdinle Online
Koox hubeysan & Ciidanka Dowladda oo Muqdisho ku dagaalamay
Dagaalkaan oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya iyo Koox Burcad ah uu ku dhex-maray degmada Dhareenleey ee Gobolkan Banaadir.
Dagaalka oo ka dhacay Xaafada Xoosh ayaa waxaa u yimid, kaidb markii Ciidamada Booliska oo waday howlgallo ay la kulmeen Koox Burcad ah oo dhac u geysanayay dad saarnaa gaari nooca raaxadaha ah,waxaana halkaasi ku dhexmaray israsaaseyn geystay khasaaro.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay Risaala u xaqiijiyeen in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen laba ruux mid kalena uu ku dhaawacmay, kuwaas oo isugu jira labada dhinac iyo dad Shacab ah.
Degmada Dharkeenleey dadka ku nool ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ay ka cawdeen Kooxo Burcad ah oo dhac u geysanaya, waxaana Guddoomiyaha degmadaasi Guhaad Sheekh Xasan uu ka digay in dad aan ka tirsaneyn Ciidamada inay hub ku dhex wataan Gudaha degmada.
Previous articleWeerar ka dhacay Dhuusamareeb & faah faahin laga helayo
Next articleMaamulka Hir-Shabeelle oo sheegay in culeys kala kulmayaan Al-Shabaab